तपाई ‘हनि ट्रयाप’मा परिरहेको पनि हुन सक्छ है – Mero Pradesh TV
सम्बन्धको सुरुआती चरणमा हुनुहुन्छ ? कोही युवा या युवतीले तपाईसँग चिनजान गरेको केही समयमा नै प्रेम सम्बन्ध कायम गरेका छन् ? तपाई उसको बारेमा पूरा जानकार हुनुहुन्न तर प्रेम सम्बन्ध मात्र हैन, शारिरीक सम्बन्ध कायम गर्न समेत पुग्नुभएको छ ?
जुनसुकै पेशा वा व्यावसायमा अभ्यस्त भएका मानिसलाई प्रेमको पासोमा अल्झाएर लुटपाट गर्ने नियत राखेका कयन समूह र व्यक्ति हुन सक्ने भएकाले सजग नहुँदा हनि ट्रयापमा पर्न सकिने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले सम्बन्ध स्थापित गर्दा ध्यान नदिए पछि पछुताउन बाध्य हुनुपर्ने जोखिमबाट जोगिन सुझाव पनि दिएका छन् । साभार दैनिक नेपाल